စွမ်းအင်သုံးကိရိယာအမျိုးအစားများကဘာတွေလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / Power Tools အမျိုးအစားများကဘာတွေလဲ။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-03-13 မူလ:ဆိုက်ကို
အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးကိရိယာများ:လက်ကိုင်နှင့်အိတ်ဆောင်။ လက်ကိုင်ပါဝါကိရိယာများသည်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အဆင်ပြေပြီးကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။ များစွာသောမျိုးကွဲဖြစ်လာသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဘဝသည်။ များစွာသောအမှတ်တံဆိပ်ရှိပါတယ်စံပြပါဝါ tools များ။ ပါဝါကိရိယာများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအရရည်ရွယ်ချက်ကိုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ ကျွန်တော့်ကိုရှင်းပြပါရစေ။ Power Tools အမျိုးအစားများဆိုတာဘာလဲ။
Power Tools များကိုအဓိကအားဖြင့်သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းအားကိရိယာများ, ကြိတ်ဆုံပါဝါကိရိယာများနှင့်မီးရထားပါဝါကိရိယာများနှင့်မီးရထားစွမ်းအင်သုံးကိရိယာများနှင့်မီးရထားစွမ်းအင်သုံးကိရိယာများနှင့်မီးရထားစွမ်းအင်သုံးကိရိယာများနှင့်မီးရထားစွမ်းအင်သုံးကိရိယာများနှင့်မီးရထားစွမ်းအင်သုံးကိရိယာများကိုထည့်သွင်းထားသည်။အများအပြားရှိတတ်သောပါဝါ Tool ပစ္စည်းများလျှပ်စစ်သံကြိတ်စက်များ, လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာသံကြိုးများ, လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာသံကြိုးများ, လျှပ်စစ်သံတူစက်များ, လျှပ်စစ်သံတူများနှင့်သက်ရောက်မှုများ, ကွန်ကရစ်တုန်ခါသူများနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးသူများနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကင်းရုံများပါဝင်သည်။
လျှပ်စစ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစွမ်းအင်အဖြစ်အသုံးပြုသောတူးဖော်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်သုံးကိရိယာများနှင့်0ယ်လိုအားအရှိဆုံးသမားရိုးကျထုတ်ကုန်ဖြစ်သည် ပေါသောပါဝါ tool ကိုထုတ်ကုန်။ နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရောင်းအသံပမာဏသည်တရုတ်၏စွမ်းအင်သုံးကိရိယာများ၏ 35% ရှိသည်။ ဤနံပါတ်များသည်လေ့ကျင့်ခန်း၏အမြင့်ဆုံးအတိုးကိုရည်ညွှန်းသည်။ အမြင့်ဆုံး ferrous သတ္တုများ, ပလတ်စတစ်နှင့်အခြားပစ္စည်းများအတွက်အများဆုံးတူးဖော်နိုင်သောအချင်းအချင်းသည်မူလသတ်မှတ်ချက်များထက် 30-50% ထက် 30 မှ 50% အထိရှိသည်။လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုလက်လေ့ကျင့်ခန်းများ,Rotary Hammer လေ့ကျင့်ခန်း.
အကျိုးသက်ရောက်မှုလျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းသည်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်သက်ရောက်မှု function ကိုထပ်ဖြည့်သည်။ သစ်သား, သတ္တုနှင့်အခြားပစ္စည်းများအပြင်၎င်းကိုကျောက်တူးရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်.
လျှပ်စစ်ကြိတ်သမားသည်ကြိတ်စက်သို့မဟုတ် disc ကိုနှင့်ကြိတ်များအတွက်ကိရိယာတစ်ခု။ ဖြောင့်လျှပ်စစ်ကြိတ်သမားများနှင့်လျှပ်စစ်ထောင့်ကြိတ်စက်များရှိသည်။
MIniature ထောင့်ကြိတ်စက်အိတ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်လက်သမားပါဝါကိရိယာများဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ကြိတ်ခြင်းအတွက်ဖန်ဖိုင်ဘာအားဖြည့်ပလပ်စတစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်သတ္တုများနှင့်ကျောက်တုံးများကိုဖြတ်တောက်ခြင်း,
လက်ကိုလက်ကိုဖြောင့်ကြိတ်ရေသတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်သတ္တု, ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်သတ္တုတို့တွင်အသုံးပြုသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာလိုင်မှိုနှင့်လိုင်စင်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအမျိုးအစားများ pneumatic ဖြောင့်ကြိတ် grinder နှင့် pneumatic ဖြောင့်ကြိတ် grinder ဖြစ်ကြသည်။
လျှပ်စစ်လိမ်ဖဲ့ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဝက်အူလှည့်ဖြစ်ချည် connections များတင်နှင့်ချဘို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်လိမ်ဖဲ့ခြင်း၏ထုတ်လွှင့်ခြင်းယန္တရားကိုဂြိုဟ်ဂီယာဂီယာတစ်ခုနှင့်ဘောလုံးဂီယာနှင့်ဘောလုံးကိုစီးဆင်းမှုသက်ရောက်မှုသက်ရောက်မှုကိုပါ0င်သည်။ လျှပ်စစ်စက်လှေကားသည် JAW Clutch Transmission Princism သို့မဟုတ်ဂီယာဂီယာယန္တရားကိုချမှတ်သည်.
လျှပ်စစ်သံတူသည်လျှပ်စစ်ဖြစ်သည်လျှပ်စစ် Rotary Hammer Drillအဆုတ်ရောင်သံတူယန္တရားနှင့်အတူပူးတွဲလုံခြုံမှု clutch နှင့်အတူ။ လျှပ်စစ်တူs တူးဖော်ခြင်း, grooving and roughtening ကွန်ကရစ်, အုတ်နံရံများနှင့်အဆောက်အ ဦး အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ချဲ့ထွင်ခြင်းသော့ခလောက်နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး၎င်းသည်ပိုက်လိုင်းနှင့်စက်ကိရိယာအမျိုးမျိုး၏တပ်ဆင်မှုမြန်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ကွန်ကရစ်တုန်ခါမှုs လေထုတွင်းတွင်းများကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်အားဖြည့်ရန်ကွန်ကရစ်ဖောင်ဒေးရှင်းများကိုလောင်းသောအခါကွန်ကရစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြည့်စွက်သည့်အခါကွန်ကရစ်ကိုကျစ်စေခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက်လျှပ်စစ်တိုက်ရိုက်ကာကွယ်နိုင်သောတုန်ခါမှုစွမ်းအား၏ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသောအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုစွမ်းအားကိုမော်တာမှမောင်းနှင်သည့်မတူကွဲပြားသောအလှည့်ကျခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်.
၎င်းကိုသစ်သားသို့မဟုတ်သစ်သားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုစီစဉ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်သောအခါ၎င်းကိုဂြိုလ်သားငယ်လေးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှင်၏ဓားရိုးကိုခါးပတ်တစ်ချောင်းဖြင့်မော်တာရိုးတံဖြင့်မောင်းနှင်သည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးကိရိယာများ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများ စံပြပါဝါ tools များ စျေးပေါပါဝါကိရိယာကိရိယာ Rotary Hammer Drill minateure ထောင့်ကြိတ်စက် လက်သမားပါဝါကိရိယာများ လက်ကိုင်သတ္တုဖြောင့်ကြိတ်စက် လျှပ်စစ် Rotary Hammer Drill ပါဝါ Tool ပစ္စည်းများ